Ra’iisul wasaare Rooble oo lagu eedeeyey lix qodob oo xasaasi ah. | Warbaahinta Ayaamaha
Ra’iisul wasaare Rooble oo lagu eedeeyey lix qodob oo xasaasi ah.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Musharax Madaxweyne C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa markii u horreysay weerar afka ku qaaday Ra’iisul Wasaare Rooble, isagoo su’aal ka keenay mas’uuliyadiisa hoggaamineed ee amniga iyo doorashooyinka.
C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaare Rooble uu balan qaaday inuu qabanayo doorasho xalaal ah, shacabkana u sheegay in Kiiska Ikraan cadaalad u raadinayo, balse waxaas oo dhan ay meesha ka baxeen kaddib safarkii Rooble uu Qatar ku tagay.
Halkan hoose ka akhriso qoraalka C/raxmaan C/shaluur:
Raysalwasaare Rooble waxaa lagu aaminnay, isaguna ballan qaaday in uu qabanayo doorashado xalaal ah, wuxuu shacabka u ballanqaaday in uu kiiska Ikraan Tahliil caddaalad u raadinayo. Wuxuu guddi u saaray dhallinyaradii Eritrea loo qaaday, waalidkoodna aysan war iyo wacaal ka helin. Doorashadii waa taas iyadoo odayaashii iyo ergadiiba la aqoon musharraxiintii isdiiwaan gelinayaan. Raggii eedda Ikraan loo haystay waa taa la beri yeelay, wiilashii Soomaaliyeed ee Eretrea ku maqanna warkooda iska daa.